Ny fiainantsika: lalana zotra tokana
"Fa inona no soa azon’ny olona, raha mahazo izao tontolo izao aza, kanefa very ny ainy? Fa inona no homen’ny olona ho takalon’ny ainy?" Marka 8:36-37
"… ny mbola hitomboan’ny fitiavanareo bebe kokoa amin’ny fahalalana tsara sy ny fahafantarana rehetra, mba hamantaranareo izay zavatra tsara indrindra." Filipiana 1:9,10
Raha milaza ianao fa hamelabelatra ny lohahevitra hoe: «Fomba fiainana tsara», dia resaka fandanjalanjana sakafo, fanatanjahantena na fiainana ara-pahasalamana no handrasan’ny mpihaino. Vitsy dia vitsy ny hieritreritra momba ny tsy fivadihana, fahitsiana, fahalalahan-tanana, fa indrindra moa fanajana an’Andriamanitra sy ny sitrapony. Nampitsimbadihan’izao vanimpotoana izao ny soatoavina. Asehony hoe tsy maintsy atao izay tsy dia ilaina atao akory, ary hoe lany andro ny zavatra tena fototra.
Nefa dia iankinan’aina ny mahafantarana ny fomba fiainana tsara, araka ny fijerin’Andriamanitra. Satria ny fiainantsika dia mitovitovy amina lalana zotra tokana; tsy ahafahana miverina. Koa tsy maintsy hita ny lalana tokony hizorana. Tsara kokoa aza ny manaiky hotarihin’Andriamanitra, ary mitsahatra tsy manenjika intsony tanjona tsy misy votoatiny.
Tonga tety an-tany Jesosy mba hampahafantatra antsika ny lalana mankany amin’ny tena fiainana. Ny fihainoana am-pahatokiana izay lazain’Andriamanitra amintsika ao amin’ny Baiboly, no manoritra io lalana io. Ilay Mpahary ve tsy hahafantatra izay tsara indrindra ho antsika, amin’ny lafin-javatra rehetra : ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy? Raha mikatsaka ny fiheviny isika, dia hanana fiainana be dia be, mihoatra lavitra noho izay harena azo raha mihary zavatry ny tany.
Ny loharan’io fiainana mamokatra io dia ao amin’Andriamanitra sy Jesosy Kristy Zanany, Izay tonga tety an-tany mba hamonjy antsika. Omena izay mino an’i Jesosy io fiainana io. Izy mihitsy no nanambara tamin-kery hoe: “Raha misy olona mangetaheta, aoka izy hanatona Ahy ka hisotro. Izay mino Ahy, dia hisy onin’ny rano velona hiboiboika avy ao an-kibony” (Jaona 7:37-38)… fitahiana tsy misy fetra.